Andron’ny sekoly Boeny: nodimandry tampoka ny Talem-paritry ny Fanabeazam-pirenena | Région Boeny
Nodimandry tampoka ny Talem-paritry ny Fanabeazam-pirenena, Atoa Samuel Christophe, taorian’ireo kabary nifandimbiasana tamin’ny fanokafana ofisialy ny Andron’ny sekoly teto Boeny izay natao tao amin’ny CRInFP (Centre régional d’institut de formation pédagogique) Mahabibo, Mahajanga.
Semban-drahona ny Andron’ny sekoly eto Boeny, satria raha iny hamonjy ny efitrano nisy ny fialana hetaheta iny ny rehetra taorian’ny fahavitan’ny kabary sy ny lanonana ara-panjakana, dia nitambotsotra teo an-tohatra ny Talem-paritry ny Fanabeazam-pirenena, Atoa Samuel Christophe, araka ny fanazavan’Atoa Bruno Tsiketa, mpampianatra ao amin’ny CEG Amborovy izay nanao “maître de séance” nandritra ny lanonam-panokafana.
Noheverin’ny maro fa ny tsy fahafaliana teo amin’ny tsy fahatombanan’ny fikarakarana ny lanonana no anisan’ny nahahentitra mafy azy raha nandray fitenenana izy, ka anisany nitarika ny fijanon’ny fo tampoka. Nasiany teny masiaka mantsy ny fandaminana ny tribune sy ny toeran’ny mpianatra, noteneniny manokana koa ireo mpanabe sy mpianatra ny amin’ny fanajana ny fanevam-pirenena izay somary goragora noho ny hafanana migaingaina. Nasiany resaka ihany koa ny fomba fitafin’ireo ankizy mpianatra amin’izao fotoana izao.
Nentina avy hatrany tany amin’ny CHU PZaGa Androva Atoa Tale, kanefa minitra vitsy fotsiny taorian’izay dia tsy nisy aina intsony ary voalazan’ny mpitsabo fa fijanonan’ny fo tampoka no nahazo azy.
55 taona izy izao nindaosin’ny fahafatesana izao, manambady ary manan-janaka vehivavy iray. Ny filankevitry ny Ministra ny 08 oktobra 2014 no nanendry azy ho Talem-paritry ny Fanabeazam-pirenena teto Boeny. Ny 17 oktobra 2014 izy no nandray ny asany rehefa nahavita famindram-pitantanana tamin’ny Tale teo aloha, Atoa Zaranaina Tohanaina Ernest, izay Lehiben’ny faritra Sofia ankehitriny.
Tonga teny an-toerana ny atoandro io, nizaha sy nitsapa alahelo ny tompon’andraikitra voalohany teto Boeny izay notarihin’ny ny Préfet an’i Mahajanga, Atoa Ravelomahay Lahiniaina Fitiavana, sy ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar.
Ny razana dia andrasana ao amin’ny tranony ao Ambovoalanana Mahajanga. Ary araka ny fanazavana avy amin’ny fianakaviany dia hoentina any Maintirano, faritra Melaky ny razana ny zoma ho avy izao.